Ingane enzima inkinga abazali ababhekana nayo. Indlela yokunqoba ubunzima bezingane ezisencane?
Ingane encane, noma Indlela yokubhekana nesikhathi sokuguquka?
Abaningi bethu baye babhekana neqiniso lokuthi izwe elizungezile liqala ukushintsha ngokuphawulekayo, futhi sinalo. Isikhathi sesikhashana siyindlela ecacile phakathi kokungane nokukhula, lapho abazali nabanye bebona ukuthi usana, futhi usuvele ukhulile ngokwanele ukuze wenze izinqumo zakho futhi wenze izinqumo. Ngakho-ke zonke izinkinga zentsha enzima nokuqonda kwabo ngokuhlanganyela nabanye.
Intombazane enzima: yini okufanele uyenze kubazali
Abazali abaningi abakwazi ukwamukela iqiniso lokuthi umntwana wabo, ozofuna usizo lwabo njalo nokunakekelwa njalo, waba ngumuntu omdala futhi ufuna isimo sengqondo esifanayo. Uma ucabanga ukuthi izinkinga ezinengane ezinzima zivele kuphela emindenini engasebenzi, khona-ke akunjalo. Ngisho nasezindaweni ezinhle kakhulu futhi ezinobungane, izingane zizwa sengathi aziqondi kahle futhi azizwanga lapho zingabonakali kahle.
Nika ingane ithuba lokuzikhethela. Kwenze lokhu kancane kancane, uzikhandle emithwalweni kanye nokuzimela. Ungalokothi uphathe zonke izinguquko empilweni yengane yakho. Ungase ungathandi umculo ingane yakho ulalele, noma isitayela sokugqoka, kodwa kufanele uhloniphe lokho akukhethayo, bese ukuziphatha okuvukelayo kungadingekile. Ungahlubuka kanjani uma usekelwa futhi uqondwa?
Intombazane enzima nezici zokusebenza naye: ifilimu
Eminyakeni yokuguquka, izingane zibucayi kakhulu, nakuba zizama ukuzifihla ngaphansi kokunganaki nokudala kwabantu abadala. Ngalesi sikhathi yonke into ishintshe ngokuphelele, lapho sebejwayele ukujwayela: ukubukeka, imikhuba, umbuthano wezithakazelo, isimo sengqondo sabazali asishintshi. Eziningi zobunzima bezingane ezisencane zixhunywe nalokhu. Zama ukukhombisa ingane ukuthi uyayiqonda futhi uyamamukela ngendlela eyiyo. Msize athole yena futhi abhekane nezimo ezivuthayo nama-hormones aguqukayo. Ungakhohlwa ukuya esikoleni futhi ube nesithakazelo enqubekela phambili yakhe yezemfundo.
Yenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ekhaya ingane yakho izwa ivikelwe. Ungaphuthelwa ithuba elincane lokukhuluma naye, ubonise isithakazelo ezintweni zokuzilibazisa ezintsha nokuzilibazisa. Amathiphu amaningi awusizo nezincomo ezisebenzayo mayelana nendlela yokuziphatha nentombazane enzima, ungathola ngokubuka le movie:
Amathiphu awusizo kwabazali
Inkathi yeziphepho ezingokomzwelo kubangela ingane ukuba izwe ukungaqondi kahle nokulahlwa. Ngakho-ke, lapho ubhekene nenkinga yenkinga enzima, zama kuqala ukuthola ulimi oluvamile nengane. Sebenzisa isikhathi esiningi ndawonye, ​​hamba emoyeni omusha. Ukunikezela ukuhamba ndawonye ku-cinema, ukuhamba, vakashela isikhungo sokuzijabulisa noma i-ice rink. Into eyinhloko ukukhulumisana okuningi nokuxhumana okuhle. Zama ukuthola ukuthi ingane yakho iyithandani ngempela, futhi uqondise wonke amandla akhe endleleni efanele. Kungaba ukudweba, umculo, ukudlala ithuluzi lomculo, ezemidlalo.
Ukuhlanganyela ebhizinisini oyintandokazi, intsha ingakwazi ukuphumula futhi ithole ukukhishwa ngokomzwelo. Bonisa ukubekezela okukhulu nokukhuthazela, khona-ke le nkathi izodlula ngokushaqeka okungenani wonke umuntu.
Izinkinga zentsha ziyesaba abazali abaningi, futhi bona, bezama ukusiza, benza okubi kakhulu. Zama ukulalela ingane yakho bese umnika ithuba lokukhula, wenze amaphutha okuqala futhi ufunde kuzo.
Indlela yokwakha ubuhlobo nendodakazi yentsha
Ukuzibulala kwentsha: yini eyenza bahambe kulokhu?
Izitayela zezingane ezisukela eminyakeni eyishumi kuya kweyishumi nambili
Intombazane ayisaseyingane, kodwa ingakabi umuntu omdala
Ukuzethemba kanye nendima yayo ekuzifundiseni kwentsha
Imidlalo futhi kumnandi ngokuzalwa komntwana
Recipe for isobho isobho
Amaqanda aqhephukile neklabishi kale ne-Feta ushizi
Izinyawo zenkukhu isitayela sase-Asia
Izinkukhu zezinkukhu endaweni eningi
Ukuhlanganyela nomthandi wakho
Yini ongayidla ukuze ubheke okuhle
Izitshalo ezingenakuzithoba ekhaya lakho
Isobho se-Bean nemifino ethosiwe
Imenyu yengane kusukela ngonyaka owodwa kuya kokubili
Izakhiwo eziwusizo ze-crayfish
Izimonyo ekuphileni komuntu
Indlela yokwenza isibalo sama-balloon?
Ukusetshenziswa kwe-prune yokwelapha emithi yomuthi
Izingoma ezintsha mayelana nokuyinhloko